Koonfur Afrika oo ka baxaysa maxkamadda ICC - BBC News Somali
Image caption Madaxweyne Zuma ayaa la kulmay dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta oo eedihii ICC-du u haysatay ay ku wayday.
Wararku waxay intaa ku darayaan in diblomaasiyiinta dalkaasi ku wargeliyeen Qarmada Midoobay tallaabadan ay qaadayaan waxaanay ku eedeeyeen ICC-da in ay ka xagliso dalalka Afrika.
Sannadkii hore waxay Koonfur Afrika diidday in ay xidho madaxweynaha Sudan, Cumar Al-Bashiir, oo ka qayb galayay shir-madaxeedkii Midowga Afrika oo ka socday Johannesburg.
Al-Bashiir waxay maxkamadd ICC-du ku eedaysay xasuuq iyo dembiyo dagaal, isagu se wuu beeniyaa eedaymaha ah in uu xasuuq ka geystay gobolka Daarfuur ee qalalaasu ka ooganyahay ee ku yaal galbeedka Sudan.
Dhawr xarun-warbaahineed ayaa sheegay in ay heleen nuqullo ka mid ah "qoraalka ka bixidda" oo uu saxeexay wasiirka arimaha dibadda Koonfur Afrika.
"Jamhuuriyadda Koonfur Afrika waxay garawsatay in xilka ay iska saarto sidii si nabdoon xal loogu heli lahaa colaadaha jiraa aanay mararka qaarkood is waafaqayn fasiraadda sharci ee Maxkamadda Dembiyada Caalamiga" ayaa lagu sheegay qoraalka Koonfur Afrika gudbisay.
Qaramada Midoobay iyo dowladda Koonfur Afrika midkoodna ilaa haatan si rasmi ah uma xaqiijin wararkan warbaahintu qortay.
Waxa kale oo soo baxaya aragtiyo kala duwan oo xaga sharciga ah oo ku saabsan in Koonfur Afrika ka bixi karto ka mid ahaanshaheeda ICC-da iyada oo aan baarlamaanku ansixinin tallaabadaa.
Tallaabadan ay Koonfur Afrika qaaday waxay soo baxday todobaad uun ka dib markii uu madaxweynaha Koonfur Afrika, Jacob Zuma, uu booqasho ku tagey Kenya oo ah dal aad u dhaliila ICC-da tan iyo markii dacwad oogaha maxkamaddu madaxweynah dalkaas, Uhuru Kenyatta, ku eedeeyay dambiyo bani'aadannimada laga galay. Kuwaas oo uu beeniyey aakhrikiina dacwadii loo haystay ay ku burtay caddayn la'aan.